🥇 ▷ Tartankii koobka adduunka ee Fortnite wuxuu ahaa dhibbane wareejin ✅
Tartankii koobka adduunka ee Fortnite wuxuu ahaa dhibbane wareejin
Tan iyo markii loo caleemo saaray horyaalnimada koobka adduunka ee Fortnite, caannimada Kyle “Bugha” Giersdorf wuxuu dhex maray daruuraha. Tani waxay u keentay wanaag iyo xumaan wixii 16 jirka ahaa. Midkii ku dhaca qaybta labaad wuxuu ahaa dhacdo dhowaan wareegaya oo isagu ah dhibane.
Sida la sheegay Datesports, Dhacdadan ayaa dhacday xalay fiidkii halka Bugha uu baahiyay ciyaar ka mid ah Fortnite oo ku jira “Twitch” oo ah “” Bizzle “Miller oo ka yimid Ghost Gaming iyo Danny” Dubs “Walsh oo ka socda FaZe Clan. Waqtigii la wareejinayay, ayaa Bugha aabihii wuxuu galay qolka si uu u soo waco, waqtigaas, Ninkii dhalinyarada ahaa wuxuu weydiyay “miyey i wareejinayaan?” Oo markiiba u tagtay si wax looga qabto xaaladda.
Qiyaastii 10 daqiiqo ka dib, Bugha wuxuu ku laabtay kombiyuuterkiisa wuxuuna xaqiijiyay inuu yahay dhibane wareejin. Nasiib wanaag, xaaladdu si dhakhso ah ayaa loo xaliyay iyada oo mahadsanid mid ka mid ah saraakiisha qiray. Si kastaba ha noqotee, taasi micnaheedu maahan in Bugha uu xasilloonaa xaaladdan, maadaama maadooyinka yimid albaabka gurigiisu ay hubaysnaayeen.
In kasta oo kiiskani uusan ku dhicin dadka waaweyn, waxaa muhiim ah in la xasuusto in isbadalku yahay dhaqan aan la aqbali karin oo cawaaqib xumo ku yeelan kara. Si aad u badan sidaas darteed meelaha qaarkood ee Mareykanka tallaabooyin horey ayaa loo qaaday si dhacdooyinkaan si weyn loogu ciqaabo.
Dhanka kale, waxaan idin xasuusineynaa inaysan aheyn markii ugu horeysay oo caannimada Bugha ay keento dhibaatooyinkeeda. Waxa aan tixraacno waa in dhowaan ay dadku fursad u heleen in ay ku maareeyaan cayaaraha ay ku soo gudbinayeen bogga ‘Twitch’ si xun, laakiin si aan dambi lahayn.
Fortnite: Battle Royale Waxaa loo heli karaa PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch iyo aaladaha leh iOS iyo Android. Waad ka ogaan kartaa wax dheeraad ah oo ku saabsan haddii aad guji halkan.